१० वर्षिय बालकले १३ वर्षिया किशोरीलाई गर्भवती बनाएपछी… - NepalNews-24
१० वर्षिय बालकले १३ वर्षिया किशोरीलाई गर्भवती बनाएपछी…
४७ ब’र्ष’मा कक्षा ७ मा प’ढदै ह’र्क’माया माझी, यस्ताे छ सं’घ’र्षकाे’ काहानी (हेर्नुस् भिडियो)
छोरीले आफ्नो इच्छा विपरित प्रेम विवाह गरेको भन्दै बावुले आफ्नै परिवारका ७ जनालाई ज्युँदै ज’लाए
काठमाडौं। महिला पुरुष कुन समयदेखि बच्चा जन्माउन थाल्छन्। कस्तो बेला गर्भ रहन्छ? अधिकांश किशोर, किशोरीको जिज्ञासा हो। अब किशोरी त पहिलो महिनावारी पछि गर्भ बसाउन तयार हुन्छे। तर पुरुषको सन्तान उत्पादनको क्षमता कहिले देखि सुरु हुन्छ? यो खासै एकिनको बिषय छैन।
तर अचम्म १० बर्षको बालकबाट १३ बर्षकी किशोरी गर्भवती भएको खबर अहिले भाइरल बनेको छ। गर्भवती भएकी १३ वर्षकी एक बालिकाले आफ्नो गर्भमा हुर्किरहेको बच्चा आफ्ना १० वर्षका प्रेमीको भएको दावी गरेपछि दुनियाँ अचम्ममा परेको हो।
बालिकाका अनुसार उनीहरुको भेट करिब १ वर्ष अगाडि भएको थियो र उनीहरुबीच पहिलो नजरमै प्रेम भएको थियो। इभान नामका बालक र डरिया नामकी बालिकाको यो जोडी रुसको झेलेग्नोगोर्स्क शहरका हुन्।
‘द सन’को रिपोर्ट अनुसार यी दुवै एक टेलिभिजन शोमा सहभागी भएका थिए। उनीहरुले टिभी शोमा आफ्नो सम्बन्धका बारेमा उठेका कैयौं प्रश्नको जवाफ दिए। द रसिया वन च्यानलको शो ‘फादर एट टेन’ मा उनहिरुको कहानी प्रसारण भएको थियो।
यद्यपि इभानको जाँच गर्ने डाक्टर इभगिनी ग्रेकोभले भने इभान बच्चा जन्माउनको लागि शु क्रकिट उत्पादन गर्न निकै अपरिपक्व भएकोले उनी बच्चाको पिता हुन नसक्ने बताएका छन्।
बालिका भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनले आफ्नो अन्य कुनै पा र्टनर भएको कुरा पनि अस्वीकार गरेकी छिन्। रोचक त के भने एक मनोविज्ञले ती बालिकाको कुरा आफूलाई विश्वास लागेको बताएका छन्।
रिपोर्टका अनुसार यी दुवै बालबालिका अभिभावकको अनुमतिपछि टिभी शोमा सहभागी भएका थिए। अभिभावकले दुवै बालबालिकाको मेडिकल जाँचको अनुमति पनि दिएका थिए।
यो जोडीलाई लिएर स्थानीय समाजमा भने गम्भीर बहस सुरु भएको छ। ८ महिनाकी गर्भवती डरिया र उनकी आमा बच्चालाई हुर्काउन चाहन्छन्। डरियाकी ३५ वर्षकी आमा एलेनाले आफ्नी छोरीले स्वयं यो सम्बन्ध स्वीकार गरेको बताएकी थिइन्।
Previous articleआफ्नो मालिकको मृत्यु हुने थाहा पाएपछि अन्तिम पटक अस्पतालमा पुगेर कुकुरले ‘गुड बाइ’ गरे संगै मालिकको पनि मृ त्यु (भिडियो
Next articleकाठमाण्डौमा भेटिएकी यी यौ’नकर्मी युवतीले भनिन्, ‘इज्जत नभएर मात्र हो, कमाइ भने निकै राम्रो छ’